Efa azo raisina amin’ny fiteny espaniôla izao ny torolàlana FPCC “Check Before You Tech” · Global Voices teny Malagasy
Efa azo raisina amin'ny fiteny espaniôla izao ny torolàlana FPCC “Check Before You Tech”
Loharano ho an'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany momba izay teknôlôjia horaisina
Voadika ny 05 Novambra 2020 2:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Español, Italiano, English
Sary fanaingoana avy amin'ny torolàlana “Check Before You Tech” (Amarino alohan'ny hikirànao teknolojia) omen'ny FPCC, fampiasàna nahazoana alàlana.
Hatramin'ny 1990, notohanan'ny First Peoples’ Cultural Council (FPCC), Crown Corporation ao anatin'ny faritra Kôlômbià britanika (B.C) ao Kanadà ny B.C. First Nations amin'ny fanomezan-dry zareo aina vao indray ny fiteny, ny zavakanto ary ny kolontsainy. Ho fanampin'ireo fandaharanasa nahomby, toy ny Language Nests sy ny Mentor-Apprentice, dia nitàna anjara toerana lehibe ihany koa ny FPCC tamin'ny ezak'izy ireo hampiditra ny teknôlôjia tao anatin'ny ezaka famelomana indray ataon-dry zareo, tamin'ny fiarahana tamin'ireo vondrompiarahamonina Firenena Voalohany mihoatra ny 200 ao amin'ny B.C izay mampiasa fiteny 34 samihafa.
Iray amin'ireo hetsika teknôlôjika fitaratra ataon'izy ireo ny tetikasa First Voices, vovonana iray “mampifandray ny fahalalàna voizina ao anatin'ny fitenintsika sy ny teknolojia nomerika maoderina.” Misy tarika misahana ny fiteny avy ao amin'ireny vondrompiarahamonina ireny mampakatra ireo rakibolana, voanteny, tantara, hira, fampiasa ho an'ny fitendry, ary loharano hafa maro ho ety anaty aterineto.
Tsy ela akory izay, namokatra torolàlana iray maimaimpoana ety anaty aterineto ny FPCC, antsoina hoe “Check Before You Tech,” manome torohay manandanja ho an'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany momba izay tokony hojerena alohan'ny hividianana na hampiasàna vola amin'ireo teknolojia nomerika ho an'ny asan-dry zareo fanomezana aina vao ny fiteniny.
Mety ho sarotra ny hahalàla ny fomba hifantenana izay teknôlôjia tena mety ho an'ny asanao ho an'ny fiteny, na ny fanontaniana tokony ho apetrakao alohan'ny hividiananao fitaovana iray. Alohan'ny hividianana na hitrandrahana rindrambaiko iray momba ny fiteny, lisitra iray azo zahàna tsara ity torolàlana ity, hanampy ireo vondrompiarahamonina handray fanapahankevitra voazava tsara.
Mazava ho azy, ireny no fanontaniana mety ho jeren'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany hafa satria mikatsaka toy izany koa ny hampiditra ny teknôlôjia ho ao anatin'ny asany ho fanomezana aina vao ny fiteny ry zareo. Niaraka niasa ny Rising Voices sy ny FPCC mba hahatonga ity torolàlana ity ho azo raisina amin'ny fiteny espaniôla hozaraina amin'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany ao Amerika Latina. Noho ny fiarahana miasa tamin'ireo mpandika lahatsoratry ny Global Voices amin'ny fiteny espaniôla: Belén Correa Abendaño, Julieta F., sy Romina Navarro, efa azo trohana ao amin'ny tranonkala Activismo Lenguas ity torolàlana “Analizar Antes de Digitalizar” efa vita dika ity.
Trohy eto ny dika amin'ny fiteny anglisy avy ao amin'ny tranonkalan'ny FPCC